OverNight Mask / Sleeping Pack/ Sleeping Mask ဆိုတာ ဘာလဲ?? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Nov 4, 2019
Kbeauty က ကမ္ဘာ့အလှပရေးရာ Industry မှာ နေရာရလာတာနဲ့ အမျှ Korean brand တွေကနေ စတင် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ night cream အစားထိုး sleeping mask တွေအကြောင်း ပြောပြမယ်နော်..
Sleeping mask ဆိုတာ ပုံမှန်မျက်နှာပေါ်တင်ပြီး ပေါင်းတင်ရတဲ့ mask sheet တွေလောက် rich မဖြစ်ပေမယ့် night cream တွေထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပိုတယ်။ heavy ပိုဖြစ်ပါတယ်။Treatment ကောင်းကောင်း ပိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
မြတ်နိုးတို့ အိပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ အရေပြားက အပြည့်ဝ အနားယူခွင့်ရတာ ဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပြုပြင်မှုတွေrejuvenation တွေ လုပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝအောင် ပေးနိုင်တဲ့ skincare တွေ သုံးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
အဓိကကတော့ အချိန်ပေးပြီး mask မသုံးနိုင်သူတွေ၊ Night cream သေချာမလိမ်းတဲ့ သူတွေအတွက် တစ်ခါတည်းနဲ့ mask ရော nigh cream ရောရဲ့ effect ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ lazy girl product လေးပါရှင်။
Sleeping mask တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ညဘက်လိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာ အရေပြားမှာရှိတဲ့အနာအဆာတွေ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အရေပြားအတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်ဆည်းပေးတာပါ။ Sleeping pack သုံးလို့ပိုအရေပြားကြည်လာတယ် တင်းလာတယ် လှလာတယ်ဆိုပြီး လူတော်တော်များများလည်း လက်ခံလာကြလို့ kbeauty တွေသာမက တခြား ဥရောပနိုင်ငံတွေကပါ လိုက်ထုတ်လာကြပါပြီ။
အသုံးပြုပုံကတော့ ညဖက် မျက်နှာသစ်ပြီး ပုံမှန် skincare steps တွေ လိမ်းပြီးတဲ့အခါ အပေါ်က ပါးပါးလေး ထပ်လိမ်းပေးရုံပါပဲရှင်။ တစ်ပတ်ကို ၃ ခါလောက်ပဲ သုံးပေးဖို့တော့ သတိပေးပါရစေနော်။ မဟုတ်ရင် skincare resistance ဖြစ်ပြီး ဘာလိမ်းလိမ်း မတိုးတော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်လို့ပါရှင်။
ခေတ်စားနေတဲ့ sleeping mask လေးတွေ အကြောင်း သိရလို့ on doctor ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
ဆောင်းရာသီမှာ ကိုယ့်အသားအရည်လေး ကြည်လင်ဝင်းပနေစေဖို့ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလည်း ?
Facial mask sheet နဲ့ wash off mask တွေ ဘာကွာတာလဲ???
ဆောင်းရာသီမှာ ကိုယ့်အသားအရည်လေး ကြည်လင်ဝင်းပနေစေဖို့…
ကျန်းမာရေအတွက်သာမကဘဲ အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့…